मुदी-बगर तातोपानीको स्वर्णिम यात्रा | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार मुदी-बगर तातोपानीको स्वर्णिम यात्रा
मुदी-बगर तातोपानीको स्वर्णिम यात्रा
२ मंसिर २०७७, मंगलवार १९:१४
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि पश्चिम दरबाङ्ग हुँदै करिब दुई दिन लगातार हिंडेपछि धवलागिरी गाउँपालिका वडा नं. ४ बगर भन्ने गाउँमा पुग्न सकिन्छ । धवलागिरी हिमालको काखमा अवस्थित यस बगर तातोपानी बेनी सदरमुकामदेखि करिब ७० कि.मि.को दुरीमा रहेको छ भने यस तातोपानी कुण्ड समुन्द्री सतहदेखि करिब २६ सय मिटर उचाईमा रहेको छ । पहिलेपहिले त्यस गाउँका मान्छेहरु पैदल हिंडेर दुई दिनमा बेनीबजारमा आई पुग्दथे भने अहिले यातायातको सुविधाले गर्दा एकैदिनमा बेनी आई पुग्दछन् ।
अहिले दरबाङ्ग–धारापानी–ताकम–मुना–दर हुँदै मुदी गाउँसम्म मोटरबाटो पुगेको छ भने अर्को बेनी ढोरपाटन जोड्ने सडक मार्ग बेनीदेखि दरबाङ्ग–बिम हुँदै मराङ्ग कल्लेनीसम्म पुगेको छ । तर सडक निर्माण कार्य भइरहेकोले यस मार्गमा भने मोटर चलेको छैन । भौगोलिक दुरीको हिसाबले दुुर्गम तथा कुनाकाप्चा मानिने मुदी बगर गाउँ प्राकृतिक हिसाबले भरिपूर्ण देखिन्छ । शिरमा सुन्दर धवलागिरी हिमाल चम्किरहेको छ । त्यस हिमालको फेदमा वरिपरि जंगल र बीचमा स्न्दर बगरको गाउँ छ । गाउँदेखि एक डेढ घण्टा हिंडेपछि अमर्केको सुन्दर झरनाको काखमा रहेको तातोपानी कुण्डमा सजिलै पुग्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्यको साथमा विविध जैविकताको धनी गाउँको रुपमा यस बगर गाउँलाई चिनिन्छ । यही कारण वर्षौं पहिलेदेखि यस क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरी धवलागिरी पदमार्ग खोलिएको थियो । यस पदमार्ग हुँदै धवलागिरी वेशक्याम्प, इटली वेशक्याम्पसम्म पुग्न सकिन्छ । सिजनमा सयौं जना विदेशी पर्यटकहरु यसै पदमार्गमा आवतजावत गर्दछन् ।
यो वर्ष भने कोरोनाको महामारीका कारण सुनसान प्राय छ ।यसका साथै एक हप्तासम्म पैदल हिंड्न सकियो भने मुस्ताङ्ग जिल्लाको मार्फा तथा लेतेमा निस्कन सकिन्छ । यसरी पर्यटकीय हिसाबले पनि उत्तिकै सुन्दर मानिने यस बगर गाउँ स्वर्ग जत्तिकै सुन्दर प्रकृतिमा रमेको छ । यति धेरै प्राकृतिक सौन्दर्य एवम् जैविक सम्पदाको धनी हुँदाहुँदै पनि प्रचारप्रसारको अभावमा यहाँको अनुपम सुन्दरता ओझेलमा परेको छ ।
वि.सं. २०५६ सालतिर हामी बगर जाँदा नाउराको ठाडो अप्ठ्यारो विकराल भिरमा नाम मात्रको बाटो थियो । एक ठाउँको भिरमा काठको भ¥याङ्ग हालेको थियो । त्यस भ¥याङ्गमा उक्लिँदा म र मेरो साथी सञ्जय जुग्जालीको सातोपुत्लो गएको थियो । यही भिरमा हामी पुग्नुभन्दा करिब तीन वर्ष अघि पाँच जना मान्छे भिरमा लागेको डढेलोले डढेर मरेका थिए । यही कहालीलाग्दो भिरको बाटोमा यहाँका मान्छेहरुले भेडा, बाख्रा तार्ने गर्दथे ।
नुनको भारी, अन्नको भारी बोकेर हिंड्ने गर्दथे । यसरी ज्यादै जोखिममा यात्रा गरिरहेका थिए । समय बित्दै गयो । केही वर्ष पश्चात् माओवादी जनयुद्धकालमा माओवादी जनसेनाले नै डरलाग्दो अप्ठ्यारो भिरको बाटो खन्ने दुस्साहस ग¥यो र अप्ठ्यारो भिर पहरा जनसेनाले नै खनिदियो । बाँकी सजिलो भागको बाटो बगरबासीहरुले खनेका थिए । त्यसपछि ६ घण्टा लाग्ने बाटो अहिले दुई घण्टा मात्रै लाग्ने भएको छ । त्यस समयदेखि बगरबासीहरु बाटो हिंड्न पाएका छन् । त्यहाँको तातोपानी कुण्डमा पुग्नका लागि करिब दुई घण्टा उकालो र एक घण्टा जेल्टुङ्गको ओरालो झरेपछि मात्रै तातोपानी कुण्डमा पुग्न सकिन्छ । बिचमा म्याग्दी नदी तरेर जानुपर्छ तर त्यहाँ झोलुङ्गे पुल नभएकोले त्यहाँका मान्छेहरुले वर्षेनी काठेपुल निर्माण गरेर पारिपट्टि तातोपानी कुण्डमा जाने गरेका छन् । यद्यपि काठेपुल नहुने हो भने पारीपट्टिको तातोपानी कुण्डमा पुग्ने सम्भावना छैन । अहिलेसम्म त्यहाँका समुदायले यसरी नै दुःखसुख गुजारा चलाएको देखिन्छ ।
यहाँको प्राकृतिक सम्पदालाई राज्यको सम्पत्तिमा परिणत गर्ने हो भने यस ठाउँमा राज्यको नजर पुग्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । किनकी त्यस तातोपानी कुण्ड प्रकृतिको अनुपम सुन्दरताको काखमा झुमिरहेको छ । धवलागिरी हिमालको फेदमा चम्किरहेको छ । सुन्दर छहराको साथ मुस्कुराइरहेको छ । यहाँको तातोपानी कुण्डले दशौं होइन, हजारौं पर्यटकहरुको पर्खाइमा छ ।